Filtrer les éléments par date : jeudi, 19 septembre 2019
jeudi, 19 septembre 2019 21:18
BEPC Tana: Nivaly androany
Nody vetiny ny rano natsakaina ho an'ireo nilofo sy nianatra.
Nivaly androany ny valim-panadinana BEPC teto Antananarivo renivohitra.
jeudi, 19 septembre 2019 20:29
Ady amin’ny areti-mifindra: Nanolotra laboratoara mitety vohitra ny fanjakana amerikana
Mipetraka ambony fiara tsy mataho-dàlana ity laboratoara ity, izay hampiasain’ny Institut Pasteur de Madagascar (IPM) ho fanohanana ny asa fanaraha-maso sy fiadiana amin’ny areti-mifindra ataon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka.
Mitentina 200 000 dolara ity laboratoara ity izay ahitana fitaovana tena raitra, ary afaka mandeha amin’ny làlan-dratsy.
Tamin’ny taona 2017, mandritra ny fihanaky ny valan’aretina pesta, no tsapa fa tena ilaina ny laboratoara mitety vohitra. Izy ity dia hanao fisedrana sy analizy mikrobiolojika ary fanadihadiana any amin’ny faritra lavi-toerana. Hanamora ny fanadihadiana mikasika ny fihanaky ny areti-mifindra koa izy, toy ny tazomoka, ny pesta sy ny kitrotro.
Fandriampahalemana: Hametrahana Zandary any amin’ireo faritra mena
Voakasik’izany any Ranontsara Sud, Beravina, Ambovombe ary Andriamena. Efa miantomboka ny fanorenana ireo toerana hametrahana ny Zandary any amin’ireo faritra mena ireo, izay hiasan’ny Zandary miisa 100, ka manamboninahitra ny 25 amin’ireo, ary Zandary vao avy nivoaka ny Sekolin’ny Zandarimariam-pirenena ny 75.
Hisahana sy hitety ireo faritra rehetra manodidina ireo toerana hitobiany izy ireo, hamerina ny fandriampahalemana amin’ny laoniny.
Hahazo fiara vaventy iray sy fiara tsy mataho-dàlana roa isaky ny toby, ary moto folo avy izy ireo. Hisy ny toeram-ponenan’izy ireo izay hisy rano sy jiro ary hahafahany miaina tsara.
Nahazo toerana iray, ary eo amin’ny faha-95 maneran-tany i Madagasikara, araka ny filaharan'ny ekipam-pirenena maneran-tany navoakan’ny Federasiona iraisam-pirenena amin’ny baolina kitra (FIFA), tamin’ity volana septambra 2019 ity.
Faha-21 i Madagasikara aty Afrika, faha-3 aty atsimon’i Afrika, ary voalohany eto anivon’ny Ranomasim-be indianina.
Notanterahina teny amin’ny lapan’ny Praiminisitra, Mahazoarivo, androany ny fiaraha-midinika andiany faha-16 teo amin’ny Governemanta sy ny mpiara-miombon’antoka mikasika ny fampandrosoana.
Hevi-dehibe telo no nifantohan’ny dinika, dia ny fiomanana amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna sy ireo mpikambana eo anivon’ny Filankevitry ny tanàna, ny « Plan Emergence Madagascar » ary ny mahakasika ny fanavaozana ny sehatry ny fanabeazana (PSE).
Mahakasika ny fiomanana amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna dia nanambara ny Lehiben’ny governemanta fa mahatsapa ny fahatomombanana sy filaminan’ny zotra anomanantsika io fifidianana io ireo mpiara-miombon’antoka ka naneho ny fankasitrahany an’i Madagasikara.
Vonona tanteraka ny Barea hiatrika ny lalao mandroso hihaonany amin'ny Brave Warriors Namibiana etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina amin'ny alahady 22 septambra izao.
Ny alahady manomboka amin'ny 7ora30 ny fivarotana tapakila ary amin'ny 8ora no hisokatra ny vavahady idirana ao Mahamasina.
Izay tafavoaka amin’ny lalao mandroso sy miverina amin’ireto ekipa ireto no hahazo ny tapakila amin’ny dingana famaranana amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika ifaninanan’ireo ekipam-pirenena rafetin’ireo mpilalao milalao ao an-taniny na CHAN 2020 hatao any Cameroun.
jeudi, 19 septembre 2019 19:07
BEPC Antananarivo Renivohitra: Nihena 12% ny taham-pahafahana fanadinana
Nivoaka ny atoandro teo ny voka-panadinana BEPC teto amin’ny fari-piadidiam-pampianarana Antananarivo Renivohitra. 36,91% ny taham-pahafahana fanadinana tamin'ity taona 2019 ity, raha toa ka 48,81% izany tamin’ny taon-dasa 2018. Nisy fidinany 12% teo ho eo.
Tratry ny fanalavana taom-pianarana sy ny fiovan’ny rafi-pampianarana io fidinan’ny voka-panadinana io, raha ny fanazavan-dRamananantony Lalaina, lehiben’ny fari-piadidiam-pampianarana Antananarivo Renivohitra. Reraka ny ankizy ka tsy nifantoka tamin’ny fianarana ny ankamaroany, hoy hatrany ny fanazavany.
jeudi, 19 septembre 2019 13:43
Mpanendaka misari-mamo: Nidoboka am-ponja vonjimaika eny Antanimora
Nosamborin’ny Polisy avy ao amin’ny Kaomisarian’ny 67Ha-Antananarivo, efa natolotra ny fitsaràna ary notanana am-ponja eny Antanimora ilay mpanendaka mpamily fiara, izay mody mamo hita tamin’ny tambazotra serasera.
Lehilahy iray hafa izay mpanendaka mody mamo toa azy ihany koa, no efa voasambotra teny amin’ny « Aigle Noir » Ambodin’Isotry, ary efa notanana am-ponja eny Antanimora taorian’ny nanolorana azy teny amin’ny Fitsarana.
Lehilahy iray mpanendaka miaraka amin’ny antsy lava lela eny Vatobe 67Ha ihany koa no voasambotry ny Polisin’ny CSP7.
jeudi, 19 septembre 2019 13:26
Tetikasa « Tana Masoandro »: Mahaliana mpandraharaha avy any Sina
Nanao fitsidihina ny toerana hametrahana ny fotodrafitrasa amin'ireo tetikasa « Tana Masoandro », sy fanorenena trano fonenana mirary ireo mpandraharaha Sinoa mikambana ao amin'ny "Organisation Mondiale de l'Economie Solidaire et Sociale", niaraka tamin'ny solontena avy amin'ny Ministeran'ny Fanajariana ny Tany, ny Toeram-ponenana ary ny Asa Vaventy.
Nanambara ny fahavononany hiara-hiasa amin'ny fitondrana ankehitriny ireto delegasiona ireto hanatanterahana ny tetikasa rehetra ho fampandrosoana ao amin'ny vinan'ny Filohan'ny Repoblika.
Nirotsaka hofidiana ho Ben’ny tanàna eto Sabotsy Namehana, Distrika Antananarivo Avaradrano, amin’ny fifidianana hatao ny 27 novambra 2019 i Avotraina Andriamosa. Ben’ny tanàna amperin’asa ity farany.
« Manaja lalàna ny tenako » hoy izy, ka « nametram-pialana tsy ho Ben'ny Tanànan’i Sabotsy Namehana ary nanolotra ny fahefana feno ho an'i Théophile ». Notanterahina ny harivan’ny alarobia 18 septambra 2019 ny famindram-pahefana, ary dia nisaotra ireo rehetra mpiara-miasa taminy nandritra izay efa-taona niasana izay i Avotraina Andriamosa.